Andalantanosy Ambovombe: olona 41 marary ary roa maty nisotro rano maloto - ewa.mg
Andalantanosy Ambovombe: olona 41 marary ary roa maty nisotro rano maloto
News - Andalantanosy Ambovombe: olona 41 marary ary roa maty nisotro rano maloto
Ny olon-dehibe no tena
voan’ny aretin-kibo ao amin’ny fokontany telo ka nitarika
hatramin’ny fahafatesana. “Efa nihasalama avokoa ireo marary fa
olona iray sisa tsy mbola tafatsangana am-pandriana”, hoy ny
tomponandraikitry ny fahasalamana.
Avy ny orana tany amin’ny kaominina
ambanivohitra Andalantanosy, distrikan’Ambovombe, ny herinandro
lasa teo (alarobia) ary nihandrona tamin’ny dobo ny riaka avy
amin’ny rotsak’orana. Mponina amin’ny fokontany maromaro no
mampiasa ny rano amin’ity dobo ity na misy paompy iraisana aza ao
an-tanàna. Vokany, niteraka aretin-kibo ho an’ireo rehetra nisotro
azy ny rano tao anatin’ny fokontany telo: i Bekopiky Atsimo, i
Bekopiky Avaratra ary i Bekopiky Morariva. Mandoa sy mivalana ary
indraindray miharo ra ny fivalanan’ireo marary, araka ny
fanazavan’ny talem-paritry ny fahasalamana ao Androy, omaly. Ny
faran’ny herinandro vao niseho ny aretim-pivalanana ka roa ny olona
namoy ny ainy: lehilahy 50 taona sy ankizy 15 taona. Mahatratra 41
ny olona narary vokatry ny fisotroana rano tsy voadio ary
olon-dehibe avokoa ny ankamaroany. Tsy nahitana fanaviana ny marary
fa mandoa sy mivalana be fotsiny. Ao amin’ny fokontany Bekopiky
Morariva no betsaka indrindra ny tranga, misy 23. Misy paompy roa
ao amin’ny fokontany fa misy latsakemboka aloa ny fampiasana ny
voalohany ary vidiana 50 Ar ny rano ho an’ny paompy faharoa. Noho
ny tsy fananan’ny olona vola, aleon’izy ireo maka rano amin’ny dobo
manakaiky ny tanàna. Efa nidina tany an-toerana ny
tomponandraikitra avy ao amin’ny CSB ao Andalantanosy nitondra
fanafody sy nijery ny zava-misy eny ifotony. Nanara-maso sy nanao
fanadihadiana koa ny talem-paritry ny fahasalamana ao Androy ary
nanentana ny vahoaka hampangotraka hatrany ny rano avy amin’ny dobo
vao ampiasaina. Nametraka tahirim-panafody koa ity
tomponandraikitry ny fahasalamana ity satria any amin’ny 6 km miala
ny fokontany no misy ny CSB Andalantanosy.
Ny sakafon’izy ireo koa, voamadilo
asiana tany fotsy fa tsy misy ny vokatra.
L’article Andalantanosy Ambovombe: olona 41 marary ary roa maty nisotro rano maloto a été récupéré chez Newsmada.
Nivoaka tamin'ny : 30/12/2020
Saron’ny mpitandro filaminana tany Manambotra-Farafangana ity fiara tsy mataho-dalana vaovao be nentin’ny talen’ny orinasam-panjakana lehibe iray nitondra vato “cristal” telo ambin’ny folo gony milanja manodidina ny 200kg, tamin’ny 5 jona lasa teo. Tsy misy taratasy ara-dalàna ny momba an’ireo vato. Avy any Vangaindrano nokasaina hoentina any Fianarantsoa iretsy harena ankibon’ny tany iretsy, araka ny fantatra. Nogiazana any Farafangana ireo vato rehetra. Misokatra ny famotorana momba an’io tranga io. L’article Trafika harena an-kibon’ny tany :: Talena orinasam-panjakana nitondra vato « Cristal » 200kg est apparu en premier sur AoRaha.
Na dia efa tafakatra any amin’ny dingan’ny famaranan’ny tompondakan’i afrika (CAN 2019) atao any Cameroun aza ny Barean’i Madagasikara dia tsy mitsahatra ny mitady ireo mpilalao manana fahaiza-manao ny mpanazatra, Nicolas Dupuis. Hanatevin-daharina ny Barea i Jeremy Morel mpilalao ao amin’i « Olympique Lyonnais ». Vodilaharana ny toerana misy azy ary mafy izy amin’io toerana io. Noho izany, hitondra ny traik’efany ao amin’ny ekipa-pirenena malagasy izy. Efa nilalao tao amin’ny FC Lorient izy ny taona 2002 ka hatramin’ny taona 2011. Teraka tamin’ny 02 Aprily 1984 ary mirefy 1m72 izy. Nifindra tao amin’ny « Olympique de Marseille » indray izy ny taona 2011 ka nahazo ny « trophée des Champions » tamin’io taona io. Nahazo ny « Coupe de la Ligue » kosa ny taona 2012. Nanomboka ny taona 2015 kosa izy no tao amin’ny « Olympique Lyonnais ». Efa nandray anjara tamin’ny « Ligue des Champions » ny taona 2016 sy « Europa Ligue » ny taona 2017 sy 2018. « Tsy atao ambanin-javatra ireo lalao roa farany mialoha ny CAN 2019 atao any Cameroun satria zava-dehibe eo amin’ny ara-tsaina ho an’ny mpilalao ireo lalao farany ireo. Ilaina ihany koa ny fampiankarana hatrany ny laharan’i Madagasikara eo amin’ny FIFA », hoy ny mpanazatran’i Barea Nicolas Dupuis raha nivahiny tao amin’ny fandaharana Midi Ma’nifik. Hilalao ity vodilaharan’i « Olympique de Marseille » ity amin’ireo lalao hihaonan’ny ekipa-pirenena malagasy amin’i Soudan sy Senegaly. 24 ireo mpilalao ho entina any Cameroun ary tombony ho antsika ny fanana an’i Jeremy Morel. Mitady lohalaharana hanohana an’i Faneva Ima ny mpanazatra Nicolas Dupuis ho fanatsarana hatrany ny Barea. Manana fijery lavitra ihany koa izy satria mitady mpilalao manana traik’efa hanofana ny mpilalao eto an-toerana. Vonona hanampy amin’izany i Jeremy Morel. Marihana fa Malagasy ny rainy. Nirina R. Cet article JEREMY MOREL: Hanatevina ny Barea est apparu en premier sur déliremadagascar.
Lalàna harena an-kibon’ny tany: mitohy ny fiaraha-midinika isan-tsehatra
Maromaro ny vondrona miaraka mikaon-doha amin’ny minisiteran’ny Harena an-kibon’ny tany (MMRS), mandinika ny famolavolana ny lalàna vaovao mifehy ny harena an-kibon’ny tany. Nitohy, omaly, ny fihaonana, nahitana ny fiarahamonim-pirenena, ny sendikàn’ny mpitrandraka, ny Tranoben’ny harena an-kibon’ny tany, ny mpitrandraka madinika ary ny fitantanan-draharaham-panjakana, tarihin’ny minisitra Ravokatra Fidiniavo.Tanjona ny fanatsarana ny lalàna hifanaraka amin’ny zava-misy ankehitriny, hitondra tombontsoa toekarena sy sosialy avy amin’ny harena an-kibon’ny tany. Samy nandroso soso-kevitra avokoa ny isan-tsehatra rehetra. Tsapa fa ankoatra ny fiadiana ny tombontson’ny vondrona tsirairay, hita taratra ny fiarahana mikaroka ny tombontsoan’ny firenena sy ny vahoaka amin’ny ankapobeny sy eny ifotony.Maro ny dingana mbola hatao amin’ity famolavolana ity lalàna ity. Miainga any amin’ireto komity mpandinika ireto, mankany amin’ny filankevitry ny governemanta sy ny minisitra, ary mandalo any amin’ny antenimiera roa tonta, sns, mialoha ny fankatoavana ary miafara amin’ny famoahana didy fampiharana.Njaka A. L’article Lalàna harena an-kibon’ny tany: mitohy ny fiaraha-midinika isan-tsehatra a été récupéré chez Newsmada.
Fanadiovana ny Tanàna: narodana ireo “Kioska”, noravana ireo fanorenana ambony lakandrano
Mitohy ny fanadiovana sy fanatsarana ny Tanàna. Ankorondrano, akaikin’ny Jesosy Mamonjy, Tsaralalana eo amin’ny Conforama ary ny etsy Behoririka. Nahitana “kioska” tsy ara-dalàna sy fanorenana fotodrafitrasa eny ambony lakandrano tamin’ireo faritra ireo ka tsy maintsy nandraisana fepetra avokoa, omaly. Noravana sy narodana izany, rehefa nialohavan’ny filazana sy fampahafantarana mialoha. Mbola hitohy hatrany izany, tahaka ny efa natao teo aloha ihany.Tetibolan’ny kaominina taona 2021Etsy an-daniny, nisokatra, omaly ary haharitra 10 andro ny fivoriana ara-potoana, tanterahin’ny mpanolotsaina monisipaly eto Antananarivo Renivohitra . Tonga nitarika sy nanokatra izany ny ben’ny Tanàna Andriantsitohaina Naina sy ny filohan’ny filankevitra, Ralitera Andriamparany. Hiompanan’ny lahadinika amin’izany ny fandinihana ny tetibolan’ ny kaominina Antananarivo Renivohitra ho an’ny taona 2021.Nifampitafa mivantana tamin’ireo mpanolotsain’ny tanàna sy nitondra fanazavana ary namelabelatra momba ny politikam-pitantanana ankapobeny amin’ny tetibola 2021 ny ben’ny Tanàna.Teo koa ny fampahafantarana ny tetikasa, hotanterahin’ny mpanatanteraka. Narahin’ny fanontanian’ireo mpanolotsaina izany ary novalin’Andriantsitohaina Naina.Fanamboarana tsena sy fivarotana fiara efa niasa…Nampahafantarina tamin’izany koa ny mpanolotsaina vaovao iray, Andrianatoandro Julle, nisolo ny toeran’ny teo aloha, nodimandry. Nahazoana taratasy sy alalana avy amin’ny Fitsarana misahana ny ady amin’ny fanjakana “Tribunal administrative- Taf” izany.Etsy an-daniny, mbola hisy ny fivoriana tsy ara-potoana, nangatahan’ny ben’ny Tanàna aorian’izao fivoriana izao ny amin’ny handaniana ny fanaovana ny tetikasa, kasaina hotanterahina amin’ity taona ity. Anisan’izany ny fanaovana ny “bloc sanitaire miisa 50”, ny fanaovana fotodrafitrasa lehibe ho an’ ny tsena. Eo koa ny momba ny tanin’ny CUA ary ny momba ny toerana hamarotana fiara efa niasa, ” voiture d’occasion”, hapetraka eny Andohatapenaka akaikin’ny kianja Maki. Manampy ireo ny fanovana anaran-dalana eto Antananarivo Renivohitra sy ny samihafa.Synèse R. L’article Fanadiovana ny Tanàna: narodana ireo “Kioska”, noravana ireo fanorenana ambony lakandrano a été récupéré chez Newsmada.
Tsy ilaozan’izay mamalan-kira amin’ny politika. Tsy izy, tsy mahavoa… ? Na manao fanahy iniana. Tsy sahy, tsy matoky tena… Ambentin-dresaka tamin’ity herinandro ity ny hoe Repoblika. Tsy ifandovana ny fitondram-panjakana, amin’ny alalan’ny fifidianana andraisan’ny olom-pirenena anjara ny fanomezam-pahefana izay mitondra. Nefa misy minia mamalan-kira, mitompo teny fantatra ho hany manana ny marina sy mety ary mahasoa ny maro. Tsy mety handray anjara amin’ny fifidianana: ahoana, hanao inona… ? Tsy hita izay ilazana sy itsarana azy amin’izay lazainy sy ataony. Ny fifidianana no ahazoana mametraka azy amin’ny toerana sahaza sy mety aminy amin’izay tanjany sy izay vitany. Ny toy izany no mandringa na mamalan-kira ka izay mandray andraikitra indray no tsaraina hoe tsy ho marin-toerana na mandeha ila. Voaresaka tato ho ato koa ny hoe demokrasia. “Fitondran’ny vahoaka, avy amin’ny vahoaka, ho an’ny vahoaka”, hoy ny filohan’i Etazonia teo aloha izay, i Abraham Lincoln. Avy amin’ny vahoaka izany, izy no mampandeha azy ary ho an’ny tombontsoany. Mila mitondra izay mahasoa ny fiainam-pirenena sy ny fiainam-bahoaka ny hoe fahalalahana maneho hevitra? Fa tsy fanehoan-kery ho tsy resy tohika, manana ny marina… Mifandrohy amin’izay demokrasia izay amin’ny tany repoblikanina ny fanjakana tan-dalàna, ny fisaraham-pahefana, ny fifidianana fakana fahefana, ny fahalalahana maneho hevitra, ny fitsinjaram-pahefana… Tsy mandeha ila fa mifameno hisian’ny fahamarinan-toerana ireo. Misy ny fahefana mpanatanteraka, ny mpanao lalàna, ny mpitsara. Tsy efa samy nandray ny andraikitra tandrify azy ve ireo amin’izao fifidianana loholona izao? Tsy lavina, malalaka ny fanehoan-kevitra. Tsara henoina ary manan-jo amin’izany izay miteny na hoe vitsy anisa aza. Saingy mitondra inona eo amin’ny raharaham-pirenena sy ny fiainam-bahoaka izay lazaina sy atao? Fitsikerana, fanakiviana, fanaratsiana… Tonga amin’ny fankalahana sy fanakorontanana aza ny sasany. Tsy mety avokoa izay mitranga sy atao rehetra?Rafaly Nd.L’article Repoblika… demokratika a été récupéré chez Newsmada.
Fanaraha-maso fifidianana: nahazo 520 000 euros ny Safidy
Manohy hatrany ny fanohanany ny Ivontoerana Sampana anaraha-maso ny fifidianana, ivon’ny demokrasia ifarimbonana (Safidy) ny Vondrona eropeanina, araka ny fanambarany nampitainay, afakomaly. Ivontoerana ivondronan’ny firaisamonina sivily 10 ny Safidy. Eo ny MSIS Tatao, ny AIM, ny PFNOSCM, ny DRV, ny YMCA, ny FTMF, ny CEDII, ny ONG Ravintsara, ny ONG Ivorary, ary ny Opta.Tamin’ny fanaovan-tsonia fiaraha-miasa sy fanampiana vola 520 000 euros, avy amin’ny Instrument européen pour la démocratie et les droits de l’Homme-IEDDH, teny Ankorondrano, afakomaly, nohamafisin’ny ambasadaoron’ny Vondrona eoropeanina, i Giovanni Di Girolamo, ny fanohanany ny fanaraha-maso ataon’ny Safidy.Hanitatra ny toerana iasany ny SafidyMiara-miantsoroka amin’ny fanaraha-maso ny fifidianana solombavambahoaka sy ny fifidianana kaominaly hatongavana amin’ny fifidianana azo antoka sy eken’ny rehetra ny Safidy. Tanjona ny hanamafy ny fanoloran-tenan’ny firaisamonina sivily sy ny olom-pirenena, indrindra ny tanora sy ny vehivavy, amin’ny fanaraha-maso ny fifidianana sy ny fanabeazana amin’ny fifidianana.Hifantohana hatrany ny fanaraha-maso ny lisi-pifidianana, ny fampielezan-kevitra, ny fizotry ny androm-pifidianana, ny fifandirana amin’ny fifidianana, ny lalàna momba ny fifidianana, ary ny tamberin’andraikitry ny rafi-panjakana misahana ny fifidianana. Mitohy sy hamafisina ny fijerena manokana ny fampandraisana andraikitra ireo vehivavy.Hanitatra ny toerana iasany ny Safidy. Ezahina ny hahatratra ny 50%-n’ny mpifidy manerana an’i Madagasikara, miparitaka amin’ny distrika 41 amin’ny faritra 14. Mpanara-maso 5 000, ivontoerana fandraisana antso sy fanoratana, ny ivontoerana mpikirakira ny vaovao azo…R.Nd.L’article Fanaraha-maso fifidianana: nahazo 520 000 euros ny Safidy a été récupéré chez Newsmada.